Ciidamada Daraawiishta Jubbaland oo howlgal qorsheysan fuliyay | Banaadir Times
HomeUncategorisedCiidamada Daraawiishta Jubbaland oo howlgal qorsheysan fuliyay
Ciidamada Daraawiishta Jubbaland oo howlgal qorsheysan fuliyay
Ciidamada Daraawiishta dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa howgallo qorsheysan oo ka dhan aa Ururka Al-Shabaab waxaa ay saacadihii la soo dhafay ka sameeyeen duleedka Magalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose.
Howlgalka ayaa Ciidamada sigar ah waxaa ay uga sameeyeen degaannada Yaaqbari wayne,Farey iyo Tuulooyin kale oo hoostaga deegaanka Cabdalla Biroole, waxaana saraakiisha Ciidamada ay sheegeen inay ku raad joogan Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Gaashale Aadan Cabdiqadir oo ka mid ah Ciidamada darawishta Jubbaland ee ku sugaan jiida hore ee deeganka Cabdalla Biroole ayaa sheegay in hwolgalka ku burburiyeen Saldhigyo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in howlgalka ku dileen Xubno ka tirsan Al-Shabaab, isla markaana ay sii wadi doonaan ilaa Al-Shabaab laga saarayo degaannada hoostaga Magalada Kismaayo ee Xarunta KMG ah ee Maamulka Jubbaland.
Howlgalkan ay Maanta Ciidamada Daraawiishta dowlad Goboleedka Jubbaland ka sameeyeen duleedka Magaalada Kismaayo ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Ciidamada mararka qaar lagu weeraro degaannada hoostaga magaalada Kismaayo.
Previous articleAl-Shabaab oo fagaare ku toogtay 5 Ruux
Next articleMaxkamadda Ciidamada Puntland oo xukun ku riday Wariye Kilwa